Waa maxay sababta Us Dooro? - Shandong Chenan Makiinado Co., Ltd
5-dhidibka CNC Xarumaha Machining
Caaryada / Qaabka Processing Center
Rooti Panel Processing Center
CNC Plasma magaabay
3D Hybrid Xarumaha Machining
1.Professional R & D kooxda: cayn gaar ah injineerada xirfadeed, la qorsheeyo karo oo ay soo saaraan 5 dhidibka mashiinka CNC, rugta maaraynta darfaha farcan RV, xarunta CNC caaryada weyn iyo qalabka kale ee caadada-dhamaadka sare.
awoodaha machining 2.Powerful: Waxaan leedahay USA Hass Vertical Machining Center, USA Hass Horizontal Machining Center, Taiwan AWEA u eegis Five-Face Machining Center, noocyada kala duwan ee mashiinka caajis iyo mishiinka axdi qarameedka. In ka badan 20 sano waayo-aragnimo machining si loo hubiyo tayada iyo sax ah dhammaan qaybaha ay tudhi farsamo;
Qalabka baaritaanka 3.Advanced: Waxaan dajiyaan UK RENISHAW laser brand interferometer / USA Hogaamiyaha brand duwo qiyaaso mishiinka / Nidaamka ballbar brand UK RENISHAW, gaar autocollimator Laser / laayeen indhaha eeg Dial jiheeyaha, Dial tilmaame / box / marmar sanduuqa square square oo samayn iska caabin ningax text / caabin dhulka tijaabo / cadaadiska, si loo hubiyo in mashiinka oo dhan la waxqabadka kaamil ah ka hor dhalmada.
4.24 saacadood online iyo kooxda processional adeegga ka dib adeegga ka dib, si ay uga jawaabaan su'aasha macaamiisha ee ku habboon.
Cinwaankaaga: Mingjia W Road, Qihe Xian, Dezhou Shi, Shandong Sheng, Shiinaha 251100
© Copyright - 2018 Rights Reserved All.